bata chenjedzo! fitbit kuchaja hr kuenda kungori $ 84.99 pa ebay izvozvi, 43% yabvisa pamutengo wayo wenguva dzose
Kuru Nhau & Ongororo Bata chenjedzo! Fitbit Charge HR iri kungoita $ 84.99 chete pa eBay izvozvi, 43% yabvisa pamutengo wayo wenguva dzose
Bata chenjedzo! Fitbit Charge HR iri kungoita $ 84.99 chete pa eBay izvozvi, 43% yabvisa pamutengo wayo wenguva dzose
Fitbit Kubhadharisa HR eBay Nyowani $ 84.99 ($ 149.95) -
ITAI IZVI PANO
Mumwe wedu kufarira zviitiko zvevateveri , iyo Fitbit Charge HR, parizvino yakadzikiswa pa eBay. Kunoderedzwa neakawanda sei, iwe & apos; d bvunza, uye isu & maapos; d tinopfuura kufara kupindura iwo mubvunzo!
Iwe unogona kubvutira hofori nyowani yeFitbit Charge HR ye $ 84.99 chete parizvino, inova iyo iri kubvisa 43% kubva pamutengo wayo wenguva dzose we $ 149.95 Unogona kuiwana iri nhema kana mu oh-so-inokwezva plamu ruvara. Madiki uye makuru mabhendi ari maviri anowanikwa kusarudza kubva.
Iko & apos; s zvakare kutumira kwemahara, uko kunogara kuri kwakanaka senge mutemo wechigumwe! Sezvo chibvumirano & apos; s saucy chaizvo, izvo zvinoshandiswa zviri kukurumidza kupera. Ita shuwa yekuita nekukurumidza iwe uchiri kuisa maoko ako pane inogona kupfeka.
Uri kuwana imwe here?
Fitbit Kubhadharisa HR
samsung tarisa zvakaoma kudonha kuonekwa
T-Mobile-Sprint kubatanidzwa kwepamutemo; tarisira kuti 5G inomhanyisa kusvika ka15 nekukurumidza kupfuura 4G; Legere anobva mangwanani
T-Mobile ichapa mafoni maviri uye mitsara miviri isina muganho ye $ 100 pamwedzi yekukuputsa iwe neVerizon
Yakanakisa Cherechedzo 10+ yekutakura madhiri uye preorder zvipo kuVerizon, T-Mobile, AT&T uye Best Buy
AT & T Nhema Chishanu madhiri, tora yemahara Cherechedzo 10+ 5G kana Apple Watch 5